Matongerwo eNyika, 31 Zvita 2018
Muvhuro 31 Zvita 2018
Vamwe Vechidiki Vochema Kuti 2018 Akanga Akavaomera Zvikuru
Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 range rakavawomera zvikuru vakawanda vavo vachiti havawone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya zvisinei netariro yeshanduko yavakange vaita zvichitevera kuchinja kwehutungamiri hwenyika.
Zvita 29, 2018
Madzimai Oronga Zvinopa Mari kuBotswana
Muzvare Pretty Ganyani, avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya, vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona rehupfumi idikita, izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Dutumupengo Rinopunza Dzimba, Zvikoro kuChipinge South
Dutumupengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro neChina masikati kuChipinge South, mudunhu reManicaland.
Vana Chiremba Vanoti Vari Kutambiriswa Mari Isingavakwanire
Vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hupenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo.
Zvita 28, 2018
Zvimwe Zvikoro Zvomanikidza Vabereki Kubhadhara neMadhora ekuAmerica
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvave kuda kuti vabhadhare nemari yekuAmerica chete kwete kushandisa mabond kana maRTGS izvo zvopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe nehupenyu.
Ongororo yeZDI Inoratidza Kuti Huori Hwakanyanya kuVID neMapurisa
Mukuru weZDI, Doctor Pedzisayi Ruhanya, vanoti zvikamu makumi matanhtau nezviviri zvevakabvurudzwa zvinoti mapazi ose ehurumende ane huwori asi huori uhu huri nani mupapazi maviri aya.